Voadika ny 23 Mey 2019 4:15 GMT
Nangataka tamin'ireo mpamakiny i Carmen Holotescu, bilaogera Romainina mba hihevitra ny tsirairay amin'ireo tranonkala 300 mahery ao amin'ny Angony Weblog Romainina izay anisan'ny toro-heviny amin'ny andron'ny bilaogy, saingy avy eo manohy manaja ny fitsipika amin'ny fitanisana bilaogy dimy manokana ( roa amin'ny teny Romainina ary telo amin'ny teny anglisy) mifantoka amin'ny fakana sary sy ny fanaingoana. Mampifandray ireo bilaogy amin'ny teny Romainina, saingy avy amin'ny firenena manodidina ao Moldavia i Ethan Zuckerman, mpahay momba ny bilaogy iraisam-pirenena.
Nitanisa ireo toro-heviny dimy amin'ny teny Anglisy sy Frantsay i Yzabel, 26 taona, mpanaingo an-tsary sady mpanoratra momba ny teknolojia any Frantsa. Mampifandray an'i Yzabel ho toy ny iray amin'ireo rohy dimy amin'ny Andron'ny Bilaogy i Elvira Black, izay manoratra avy any New York. Anisan'izany koa ireo bilaogera Britanika, Aostralianina ary ny avy any Texas.
Nisafidy bilaogy roa tamin'ny teny anglisy sy roa tamin'ny teny Espaniola nosoratana avy any Etazonia, Norvezy sy Shily, ary koa iray avy amin'ny Panameana monina ao Afovoana-Atsinanana i Iria Puyosa, bilaogera Venezoelianina. Nampifandray an'i Iria ho toy ny iray amin'ireo rohy dimy ihany koa avy eo i Alvaro Ramirez Ospina, mpampianatra sarimihetsika norvezianina izay manoratra amin'ny teny espaniola ary namela fanehoan-kevitra nisaotra azy tamin'ny fanitarana ny fifandraisana mavesa-danja. Nisafidy hampifandray ireo bilaogera any Però, Shily, Espaina ary koa Kolombiana monina any Dhaka, Bangladesh i Leonel Sanchez, Venezoelianina iray hafa.
Nanome ny rohin'ireo bilaogera avy any Etazonia, Hong-Kong, Zimbaboe, India, ary Birmania i Steven ao amin'ny Singabloodypore. Nitondra ireo mpamaky azy any amin'ny weblog telo amin'ny teny Portiogey sy amin'ny teny anglisy roa i Fábio ao amin'ny Caryorker, Brezilianina monina any New-York. I Lucia Lai kosa nanamarika fa tsy niraharaha ny andron'ny Blaogy ny ankamaroan'ny tontolon'ny bilaogy Malezianina no sady mifantoka amin'ny Tetikasa Merdeka Blogger, saingy nanolotra ireo rohy dimy ihany izy na izany aza.
Tsy ny rehetra no nientanentana momba ny tetikasa na izany aza. Nanambara i Arzan, izay mandany ny fotoanany eo anelanelan'i Mumbai sy New York, fa tokony isan'andro ny andron'ny Bilaogy ary “manaisotra kely ny dikany ny fanomezana anarana ny andro iray hamahanam-bilaogy”. Kanefa, araka ny famarihan'i Desi Pundit, ” mandroso izy ary mitanisa ny vitsy amin'ireo bilaogy ankafiziny ary eny fa na dia ireo tsy tiany ho vakianao ihany koa aza”.
Ankoatra ny habetsahan'ireo rohy mipasapasaka tsy misy fiafarany manerana izao tontolo izao androany, maro ireo vondrona bilaogera eo an-toerana no mihaona mba hankalaza ity hetsika ity. Nanomana fihaonan'ny bilaogera any Paris, Frantsa i Bernard DeCarroux, raha ao amin'ny Starbucks Plaza de España any Madrid ireo bilaogera Espaniola, ary ao Strousbourg ao amin'ny toeram-pisotroana kely ao Lanterne kosa ireo bilaogera frantsay tsy avy any Paris.
Mahafinaritra tokoa ny mahita fifandraisana miampita firenena, miampita kolontsaina sy miampita fiteny isan-karazany marobe manerana ny tontolon'ny bilaogy amin'izao fotoana ary manantena isika fa hitohy mandritra ny taona maro izany. Afaka mahita bilaogera maro manerana izao tontolo izao mandray anjara amin'ny Andron'ny bilaogy 2005 ao amin'ny Technorati, IceRocket, Feedster ary BlogPulse ianao. Na, raha nandray anjara ianao dia ampahafantaro anay amin'ny fametrahana fanehoan-kevitra mampifandray ny toroinao hovakiana izany.